प्रधानमन्त्री ओलीले भेटे ट्रमलाई, २ मिनेट कुराकानी ! - Everest Dainik - News from Nepal
प्रधानमन्त्री ओलीले भेटे ट्रमलाई, २ मिनेट कुराकानी !
काठमाडौं, असोज १० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच करिब दुई मिनेट कुराकानी भएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प तथा प्रथम महिला मेलानिय ट्रम्पले राष्ट्रसंघीय महासभाको उच्चस्तरीय छलफल हुनु अघिल्लो दिन सोमबार साँझ आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा उभिएरै यस्तो छलफल भएको हो ।
याे पनि पढ्नुस एनआरएनए अमेरिकामा चरम राजनीतिक खिचातानी, जोशीको पक्षमा मत माग्दै एमाले अध्यक्ष ओली
याे पनि पढ्नुस डोनाल्ड ट्रम्पले भने– किमले अति सुन्दर पत्र लेखे, मेरो त माया नै बस्यो
गतवर्ष प्रधानमन्त्री स्वागत समारोहमा आइनपुग्ने भएपछि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सहभागी हुन गेट पुगे पनि नामको संयोजन हुन नसक्दा लज्जित भएर पर्कनु परेको थियो । यसपटक त्यस्तो अवस्था भने आएन । प्रधानमन्त्रीले भित्र अन्य मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखसँग पनि भेटे । उनी दुईपक्षीय सहकार्य र उच्चस्तरको भ्रमण आदन प्रदानको बारेमा छलफल गरेका बताइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति र प्रथम महिलाले महासभाको उच्चस्तरीय बसह आरम्भ हुने अघिल्लो दिन यस्तो भोज दिने चलन छ । त्यही प्रथालाई अमेरिकीले कायम गर्दै आएको हो । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस जिम्मेवारी र होसियारीपूर्वक संसदमा प्रस्तुत हुन अध्यक्ष ओलीको निर्देशन
ट्याग्स: donald trump, KP oli